Sikhuluma nge-Histories of science nombhali wayo, uFernando del Álamo | Izincwadi Zamanje
Sixoxa Izindaba zesayensi nombhali wayo, uFernando del Álamo
UFernando del Alamo uphendula imibuzo kule ngxoxo ngobufushane obufanayo (nentando echazayo) abhekene nayo nomsebenzi wokubhala okufakiwe kwebhulogi yakhe. Izindaba zesayensi iyiwebhusayithi eyinhloko yabathandi bamalukuluku, ama-biographies nama-anecdotes ahlobene nomkhakha wesayensi. Kusukela kwimibhalo eqoqwe lapho ngokuhamba kwesikhathi, i- incwadi okuzibiza ngegama, okushicilelwe ngokwakho.
Isikhathi esidlulile kusukela lapho siningi ngokwanele ukuba umbhali akhulume ngombono owenele mayelana nokushicilelwa kwedeskithophu, futhi nangobudlelwano bamabhulogi nencwadi ephrintiwe, izisusa zomuntu siqu ezimholela ekwenzeni umsebenzi wakhe noma izizathu zokuthi kungani umuntu wesayensi ethatha isinqumo sokusabalalisa.
Yini eyaholela ekutheni uqale ukubhala ngesayensi?
Kuyisihloko ebengilokhu ngithanda ngaso sonke isikhathi. Ngiseyinsizwa ngangikuthanda ukukhuluma ngalezi zinkinga nabangane. Abanye bahleka bethi ngithanda izinto ezingajwayelekile, kepha kukhona abanye ababuza imibuzo eminingi. I-blog ayilutho ngaphandle kokubonisa lolo thando: ukukhuluma ngesihloko ebengilokhu ngithanda ukukhuluma ngaso kakhulu.
Ngeke ngikwazi ukubhala ngesinye isihloko.
Isithombe ngu-Eduardo Izquierdo.
Kuyaziwa ukuthi ukungaguquguquki kokubhuloga akulula ngaso sonke isikhathi ukukugcina. Kungakho kufanelekile ukukhuluma ngezisusa. Kusukela ekungeneni kokuqala kudala. Ngabe uqhubeka ubhala ngezizathu ezifanayo nezakuqala kwakho?
Ngenkathi ngiqala ukwenza ibhulogi, ngangifuna nje ukuba nendawo yokubhala izintshisekelo mayelana nesayensi nabalingiswa bayo noma lokho okwangikhanga, kungaba ngenxa yokuhlekisa kwabo, okuqukethwe kwabo, noma ngoba babengasifundisa ukubona ukuthi laba bantu wenza namandla abo esimilo sakhe.
I-blog inginike ithuba lokungenzi lokhu kuphela, kodwa nokufunda ukuphawula kwabafundi abaningi. Ngihlangane nabantu ababenezinkinga ezifana nezami nezingane ezisencane ezingibhalela ama-imeyili zingitshela ukuthi bazozinikela ekutadisheni isayensi ngoba ibhulogi yami isiqedile ukubakholisa. Ngithole ukuthi kugqugquzela abantu ukuthi bafune imininingwane eminingi bebodwa. Wayengaba nomthelela kubantu futhi enze isayensi ibe yingxenye yempilo yakhe. Kuyinto engigcwalisa ngokuziqhenya nokwaneliseka.
Kepha ngiphinde ngahlangana nabantu abakholelwa ngempela ukuthi uMhlaba uneminyaka engama-6000 ubudala noma abathi izinhle ezifana ne- "Theory of Evolution kumane nje kuyethiyori" noma "Akufakazelwa."
Lokhu kungenze ngabona ukuthi umsebenzi wami awukona nje kuphela ukwaba ukuthanda kwami ​​isayensi, kodwa ukusabalalisa ngokusemandleni ami. Kumele ngenze abantu babone ukuthi banephutha noma, okungenani, ukuthi uma bengakholwa ukuthi bayikho, kungenxa yokuthi bakuthole ngaleyo ndlela, hhayi ngoba abanye bebatshelile.
Angifuni ukuthi abantu bakukholwe okuhle abakuzwayo noma abakufundayo. Ngisho nalokhu engibatshela khona. Ngifuna bafunde, bafunde, bazijwayeze nesayensi, bazi abalingiswa babo, indlela abenza ngayo nezinhloso zabo kanye nokukhathazeka kwabo, izingxoxo zabo nezinkulumompikiswano, ulaka lwabo, njll. Futhi uma sebenalo lonke lolo lwazi ezandleni zabo futhi bacwile kulo lonke; bese wenza owakho umbono.
Ngakho-ke namuhla ngenza okufanayo nalapho ngiqala khona, kodwa ngezizathu ezihlukile.
Ingabe uzibheka njengomxoxi wezindaba noma i-popularizer? Yize kungenzeka angabi imigomo engahambelani ...
Ukudalula. Angizenzi sengathi ngizochaza okwenzekile, ngaphandle kokuningi; kepha ukuthola inzuzo ethile noma umbono kuyo futhi uthathe ithuba lesimo ukuze ukwazi ukuchaza noma yiliphi ilukuluku lesayensi noma isimilo sabantu besayensi.
Ngokwesandulela sencwadi yakhe Izindaba zesayensiUkuchaza isayensi kufana nokuba sothandweni: "ufuna ukuyichaza kuwo wonke umuntu" (ukucaphuna uCarl Sagan). ¿Izindaba Zesayensi ingabe incwadi ingafinyeleleka kuwo wonke umuntu? Ngabe isayensi ingachazwa ngaphandle kwamafomula noma izinkulumo eziyinkimbinkimbi?
Okungenani incwadi ihamba naleyo nhloso. Ithi ingafundwa ngumuntu ongaqeqeshwanga okuncane kanye nesiqu.
Ngikholwa ukuthi isayensi ingachazwa ngolimi olutholakala kuwo wonke umuntu. Kwenzeka ukuthi ukuze kufinyelelwe eziphethweni isayensi efinyelele kuzo, kufanele kwenziwe ukucabanga okuyinkimbinkimbi kakhulu. Ukucabanga okunjalo kufanele kushiyelwe ongoti. Kepha sonke singayiqonda imiphumela ngemivimbo ebanzi noma singayazi imininingwane.
Ngakolunye uhlangothi, futhi kufanele ubeke amafomula athile. Angicabangi ukubeka noma iyiphi ifomula kubi ngokwencazelo. Inkinga ukuthi la mafomula anencazelo, incazelo kanye nemiphumela, futhi abaningi abayichazi ngokucacile okufanele. Kufanele ufike endaweni ephakathi nendawo lapho yonke into inomthelela wayo.
Kuthiwani ngesayensi? Ngubani ongachaza isayensi? Ngiyavuma ukuthi ngicela ngenhloso yokungasondli isihloko, kodwa okuphambene nalokho, ukwazi kuqala umbono womuntu okusebenza kwakhe la mabhulokhi amabili wolwazi ahlangana: ngabe noma zezincwadi, noma weSayensi?
Angicabangi ukuthi kunokuphikisana phakathi kwesayensi nezinhlamvu. Okukhona ukwesaba okuthile kwalabo abasohlangothini olulodwa maqondana nezingqinamba zolunye uhlangothi nokuthi ukwesaba kwesayensi kwamukelwa ngokwenhlalo kunokwesaba kwezinhlamvu. Okudingekayo ngabasabalalisi abahle ngapha nangapha. Ngihlangane nothisha ababi ezibalweni nakwe-physics kanye nasemlandweni nasolimini.
Kuyadingeka ukuthi kube khona abantu abachaza ngokungagwegwesi futhi bazibeka ezicathulweni zomlaleli.
Ukuthambekela kokugxuma kusuka kubhulogi kuya encwadini kubonakala sengathi kuthola abalandeli ngisho naphakathi kwababhali abaziwayo. Muva nje kwaziwa lokho ukuhlanganiswa kokufakwa kwebhulogi le-Saramago kuzoqala ukuthengiswa ephepheni. Ngalo mqondo, kufanelekile ukubuza: Ingabe amabhulogi abeka irekhodi, isitayela, indlela yokubhala? Ingabe zithatha indawo yencwadi ephrintiwe? Umbhali ubhekana kanjani noshintsho olusuka kubhulogi luye ebhukwini?
Kumele kubonwe ukuthi ibhulogi isitayela esihlukile kunencwadi ejwayelekile. Awukwazi ukubhala inoveli kubhulogi, ngaphandle kwalapho ikumahluko amancane, kepha noma iyiphi ibhulogi ingaba incwadi kungekudala noma kamuva. Ngikholwa ukuthi ibhulogi ayisoze yathatha indawo yencwadi ephrintiwe. Okungenani, inqobo nje uma amakhompyutha engewona usayizi wencwadi.
Ngokuphathelene nokuthi indawo evela kubhulogi iye encwadini ifika kanjani, ngicabanga ukuthi kuyisinyathelo semvelo sabo bonke labo ababhala ibhulogi isihloko sabo esiyinhloko esingewona umbono noma izindaba zamanje. Imibhalo ebhulogi yesayensi, yomlando noma yelukuluku akuyona imfashini; Ngisho ukuthi abanalo usuku lokuphelelwa isikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, ababhali abadumile abanjengoSaramago ababhala ibhulogi abanankinga ngokuhlela izincwadi. Noma yini abakubhalayo, cishe bazophumelela. Okungenani ukuthengisa.
Ngempela, ababhali abasunguliwe banezindawo eziningi maqondana nesikhathi sokuqala, futhi ukushicilela. Incwadi yakhe izishicilele yona. Yini ekuholele ekukhetheni okunjalo?
Ukungavumelani nanoma ngubani, akudingeki ubheke omunye umuntu ozokwahlulela engikubhalile. Ngenze incwadi futhi ngangifuna ukuthi umfundi ayibone ngaleyo ndlela, ngaphandle kwezihlungi noma izinguquko.
Ingabe incwadi yakho i-ISBN? Ingabe kuyinto enzima kakhulu maqondana nokushicilelwa kwedeskithophu?
Yebo, incwadi ine-ISBN. Kumahhala, yize kungaphrintiwe encwadini uqobo (ngithole i-ISBN ngemuva kokushicilelwa). Kodwa-ke, nami angibanga nezinkinga ngenkathi ngingenazo. Okuwukuphela kwento engalungile ngokushicilelwa kwedeskithophu ukuthi ayithengiswa ezitolo ezidayisa izincwadi.
Wake wayicabanga incwadi yesibili? Ungakhetha futhi ukushicilelwa kwedeskithophu?
Yebo, kuyenziwa incwadi yesibili futhi nakanjani ngizokhetha ukushicilelwa kwedeskithophu. Ngicabanga ukuthi abashicileli abanantshisekelo yokushicilela isiko, kepha izincwadi ezithengisa kakhulu ukuthola izinzuzo eziningi ziba ngcono.
Ngiyabonga kakhulu, Fernando.
Izindaba zesayensi ungakwazi thenga ngentengo engu-15,71 euros esitolo sezincwadi esingokoqobo uLulu. Kuneminye imininingwane ku- okuthunyelwe kwebhulogi okungaziwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Sikhuluma nge-Histories of science nombhali wayo, uFernando del Álamo